Umi 2015, Ningbo Oicozy manje iba ukuba ngomunye umphakeli ezikhethekile kanye isithekelisi ikakhulukazi ukubhekana umklamo, emakethe futhi ukukhiqiza izinto ingane ukuphepha, isibonelo umnyango ngesivalo, ekhoneni umvikeli isikhiya sezokuphepha, futhi isango ukuphepha nokunye.
Thina zitholakala e Ningbo, China ne elula zokuthutha ukufinyelela futhi yonke imikhiqizo yethu ukuhambisana namazinga izinga international okuyinto baziwa kakhulu ezimakethe ezahlukene emhlabeni wonke. Bebuthanela endaweni ka-2000 square metres workshop, sesinamaqembu abasebenzi kuka 80, yonyaka yokuthengisa sibalo ukuthi idlula USD3, 000.000 futhi njengamanje timbiwa 90% zokukhiqiza yethu emhlabeni wonke.
Igatsha lethu kahle futhi omuhle kakhulu ukulawula izinga kulo lonke esiteji zokukhiqiza kusenza sikwazi ukusukumela phezulu isiqinisekiso Imininingwane ukwaneliseka amakhasimende. Ngaphandle sesamukele ISO9001 kanye BSCI yokuhlola umkhiqizi yethu osizayo.